🥇 ▷ HTC: iibinta taleefannada casriga ah ee Boqortooyada Midowday (UK) ayaa la joojiyay ✅
HTC: iibinta taleefannada casriga ah ee Boqortooyada Midowday (UK) ayaa la joojiyay
Sababo la xiriira muranka badeecada ee ay la sameysay Ipcom, HTC ayaa gebi ahaanba joojisay iibinta taleefannadooda gacanta ee Boqortooyada Midowday waqtigaas. Kaliya maahan shirkadda lafteeda inay soo bandhigto taleefannada casriga ah, laakiin tafaariiqda ayaa sidoo kale joojiyay iibinta.
HTC waxaa loo haystaa inuu ku xadgudbay Patent ka Ip ip, asal ahaan loogu talagalay “tikniyoolajiyadda wireless-ka ee taleefannada gawaarida“horumar ayaa la sameeyay. HTC ayaa ku dhawaaqday eedeymaha si loo baaro, isla mar ahaantaana waxay caddeeyeen in hal nooc oo keliya ay saameynayso – laakiin sababta loo joojiyay iibinta taleefannadan casriga ah, soo-saaraha ma sharraxayo.
Heshiiska Ipcom lama uusan kulmin
Heshiis asal ah oo ka dhexeeya HTC iyo Ipcom ayaa macluumaadka ka helay BBC Waxay kaloo cadeyneysaa in HTC ay u keeni doonto Boqortooyada Midowday casriyeyn yar oo aan ku xadgudbeynin aaladda Ipcom. Si kastaba ha noqotee, HTC ma uusan waafaqin heshiiskan, sida baaritaanno ay sameysay Ipcom ay shaaca ka qaadeen inta lagu gudajiro sannadkan, waana sababta ay tahay in hadda loo joojiyo iibinta.
Haatan, Boqortooyada Ingiriiska oo keliya ayaa saameysay
Wadamada kale markii hore wax saameyn kuma laha joojinta iibka. Goorma ama in HTC ay ku bixin doonto taleefannadooda casriga ah waligood Boqortooyada Ingiriiska, weli lama oga.
5G hotspot iyo muraayadaha VR waa la sii iibin doonaa
Qalabka loo yaqaan ‘HTC 5G Hub’, 5G bandhigay iyo hotspot batari ku shaqeeya oo la mid ah kiniin ay shirkaddu soo bandhigtay MWC 2019, iyo muraayadaha Vive qoyska VR sida HTC Vive Focus Plus ayaan wax saameyn ah ku yeelan doonin waxayna sii wadan doonaan Boqortooyada Ingiriiska.
Ka bilaaw ilaa soo-saare caan ah
HTC ayaa ahayd soo saaredii ugu horreysay ee soo saarta taleefanka casriga ah ee loo yaqaan ‘Android smartphone’ sanadkii 2008. Ka dib markii ay iskaashi la sameysay Google, shirkaddu waxay ka iibisay shirkadda Google qaybteeda casriga ah qayb ka mid ah meheraddeeda casriga ah, laakiin waxay sii wadaysaa inay siiso moodallo ka mid ah taxanaha ‘Desire 12s’ oo ay sameeyeen. oo leh qalabka loo yaqaan ‘blockchain casriga ah’ HTC Exot 1 oo ah dhegeysiga.